Ingabe yi-quicksand futhi ziyini izingozi zayo | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Impela uke wabona kumafilimu amaningi abalingiswa abaphambili bangena kuwo isihlabathi esisheshayo. Noma nini lapho ukhuluma ngesihlabathi esisheshayo ucabanga ngendawo lapho isihlabathi singacwila khona ungakwazi ukweqa kuso. Ekugcineni ugcina ngokuminza. Njengoba kunezigcawu ezithile ezimangalisa kakhulu, kunabantu abaningi abazibuza ukuthi ngabe inhlabathi esheshayo ikhona ngokoqobo nokuthi banayo yini leyo ngozi abayikhombisayo.
Ngakho-ke, sizonikezela le ndatshana ukuze ichaze ukuthi iyini i-quicksand nokuthi yiziphi izici zayo nezingozi ezingaba khona.
1 Yini umhlabathi osheshayo
2 Uphuma kanjani esihlabathini esisheshayo
3 Lapho bekhona
Yini umhlabathi osheshayo
Kwezinye izindawo ezithile nakwezinye izindawo ezijwayelene nazo kule planethi, singathola isihlabathi esisheshayo. Inengozi ebheke endaweni esikuyo nezici zayo. UQuicksand waziwa ku-physics njenge-colloid fluid. I-colloid fluid yinto ekwazi ukusebenza njengoketshezi futhi okuqinile. Bangaba nezici zombili ngasikhathi sinye.
Umuntu angasho ukuthi yini uketshezi okwakhiwa yizinhlayiya ezimbili eziwuketshezi neziqinile ezisebenza ngazo zombili izindlela futhi ezingaba nezingozi ezithile. Kuyindawo yokuthi yize ekuboneni kokuqala kubonakala kuqinile futhi kuzinzile, ingaba ne-viscosity enkulu ngokwanele ukubamba umuntu. Noma iyiphi into enesisindo esingaphezu kwalokho engayinqoba njengoba ukumelana izobhajiswa kuyo.
Isici esiyisisekelo se-quicksand yileso sendawo esingaba yisihlabathi, ixhaphozi, udaka, amanzi anomhlabathi noma isihlabathi ebusweni ngeso lenyama. Ingambozwa ngamaqabunga noma ibukeke njengodaka olulula. Konke lokhu kuzoncika kuzimpawu zalesi sihlabathi esisheshayo. Inkinga ngale mihlabathi lapho i-quicksand ivame ukutholakala khona, lokhu kwenziwa ngamanzi nento eqinile kakhulu esebenza njengejeli. Lezi zinto zihlala zizinzile inqobo nje uma kungekho mandla athile atholakala kuzo.
Isibonelo, siyabona ukuthi amaqabunga neminye imizimba ekhanyayo ayishintshi isimo se-quicksand. Lokhu kusho ukuthi bayakwazi ukuxhasa ezinye izinto noma izilwane ezinesisindo esincane. Ngakolunye uhlangothi, into enosayizi omkhulu njengesilwane noma umuntu ayikwazi ukuhamba kulezi zizathu njengoba ingaqala ukucwila kuzo. Lokhu kwenzeka ngoba umuntu omkhulu noma isilwane sinokuxinana okuphezulu kunezinto zokwakheka kwesihlabathi esisheshayo.
Uphuma kanjani esihlabathini esisheshayo
Enye yezingozi ezinkulu ukubanjwa ngaphandle kwanoma yiliphi ithuba lokuphuma. Lokhu kunikezwa ama-movie namakhathuni. Lezi zindawo zisho ukuthi ukuze uphume kuyadingeka ukuthi usebenzise amandla ngokweqile ukuthi unganyakazi noma ubalekele kule nhlangano ekucindezelayo. Isisindo somzimba yiso esenza sihlehle. Lokhu kubeka ubungozi obukhulu ngoba isihlabathi singagcina simunce ngokuphelele abantu, izilwane noma izinto ezinkulu njengezimoto eziholela ekufeni. Ukufa kwenzeka ngokuminza.
Ngakho-ke, I-quicksand ibhekwa njengendawo eyingozi kakhulu futhi kufanele igwenywe njalo. Ngakho-ke iningi lenu belihamba lidla imoto, kungcono ukugwema lolu hlobo lwendawo. Uma uwe emhlabathini onenhlabathi esheshayo, into ebaluleke kakhulu okufanele uyenze akwenzi ukunyakaza okungazelelwe. Lokhu kungaholela ekucwileni ngokushesha okukhulu ngenxa yokufaka ingcindezi enkulu kuketshezi. Kunconywa ukuhlala uthule ngangokunokwenzeka ukwehlisa ijubane futhi ucwile noma ulale ngomhlane uma ufuna ukuqhubeka nokunciphisa le nqubo yokumunca.
Ukuze ukwazi ukuphuma kufanele kwenziwe ngendlela efanayo nokubhukuda. Ngomfutho omkhulu kunayo yonke kufanele ugxumele emuva ngezingalo zakho ezinwetshiwe. Inhloso ukuthi uhlale ulele ngomhlane ngangokunokwenzeka ukuze isivinini sokumunca siphansi. Lesi sikhundla sisiza ukunciphisa ingcindezi umzimba wethu osebenza kuyo kuluketshezi futhi sisabalalise isisindo ebusweni bonke bangemuva. Lokhu kukuvumela ukuthi uphume kulezi zinkambu kalula. Ukusuka kulesi sikhundla, kufanele kwenziwe ukunyakaza okufana nalapho sibhukuda emhlane.
Kodwa-ke, lokhu kufanele kwenziwe kuphela kulezo zindawo lapho singenakuthola usizo lwangaphandle. Uma sisodwa noma singenaye umuntu noma isilwane esingasisiza, sizokwenza lokhu. Kuhle ukusebenzisa intambo intambo ukuvikela isilwane esihlabathini esisheshayo bese usikhipha.
Kunokungabaza okuningi mayelana nokuthi isihlabathi esisheshayo esisakazeke kulo mhlaba sikuphi. Omunye wemibuzo ejwayelekile kakhulu ukuthi ngabe zikhona yini ezingwadule. Enye yezinto okufanele siyinake uma sithola isihlabathi esisheshayo ukuthi idinga indawo enamanzi amaningi. Ngalokhu, izindawo ezinamanzi eduze nemifula namabhishi ziyadingeka. Akunakwenzeka ukuthi kunesihlabathi esisheshayo ogwadule. Awekho amanzi anele lapho alezi zinto ezinoketshezi ezinalezi zici eziyingqayizivele.
Enye yezindawo lapho singathola khona okuningi kwalokhu kwaziswa ikhona imilomo yemifula. Kwamanye amachibi kungatholakala futhi njengemifudlana. Lokhu kungenxa yokuthi kunenqwaba yensalela enesihlabathi esihle kakhulu futhi egcwele amanzi. Kujwayelekile ukuthi lezi zinto ndawonye zingakha izindawo ezisentabeni ezinamandla okubamba abahlambi kalula.
Ezinye zezindawo okungafanele zigwenywe ukuze zingaweli kula mazwe yisigubhu nodaka lwamaxhaphozi noma amadamu. Le nhlabathi ingenza ngendlela efanayo njengoba yakhiwe yisihlabathi sobumba futhi ihambisana nenani elikhulu lamanzi. Ekugcineni, into ebaluleke kakhulu uma uwele kwenye yalezi zindawo ukubekezela ungethuki. Lokhu kuzokwenza ukuthi ube nokunyakaza okungahambi kahle.
Ngiyethemba ukuthi ngalolu lwazi ungafunda kabanzi nge-quicksand.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isimo sezulu » Ukwahlukanisa » isihlabathi esisheshayo
AMAKHAMPU KAJUAN kusho
Ulwazi oluhle kuwo wonke umuntu.
Phendula ku-JUAN CAMPOS
Imininingwane ethakazelisayo !!